UManson Ilungu Lentsapho Lynette 'Squeaky'
Umboniso weLungu loMndeni weManson
Lynette 'Squeaky' Fromme waba ilizwi leenkokeli zenkolo, uCharlie Manson xa evalelwa entolongweni. Emva kokuba uManson ugwetyelwe ebomini entolongweni, u-Fromme waqhubeka nokunikela ubomi bakhe kuye. Ukubonakalisa ukuzinikela kwakhe kuCharlie, wayejongene nompu kaMongameli Ford , apho ngoku ukhonza isigwebo sokuphila.
Ngo-2009, wakhululwa nge-parole. Ngokungafani namanye amaninzi amalungu asekhaya lakwaManson , kuthiwa uhlale ethembekile kuCharlie.
Iminyaka yobudala yabantwana
ULynette Alice "I-Squeaky" Inmeme yazalwa eSanta Monica, eCalifornia ngo-Oktobha 22, 1948, kuHelen noWilliam Fromme. Unina wayesekhaya kwaye uyise wayesebenza njengonjineli yezilwanyana.
ULynette wayengowona mdala kunabantwana abathathu kwaye wayengomnye wabadlali beenkwenkwezi kwiqela lokudansa labantwana elibizwa ngokuba yiWestchester Lariats. Iqela lalinetalente kangangokuthi baqhubeka belijikeleze ilizwe kwaye bavela kwi-show yaseLawrence Welk nakwi-White House.
Inme Leaves Home
Ngethuba leminyaka eliphakamileyo laseLyn wayefunda ilungu le-Atheenan Society of Honor and Club Athletic Club. Ubomi bendlu yakhe, ke, bebuhlungu. Uyise wakhe onyantyantle wayedla ngokumxabisa ngezinto ezincinci.
Esikolweni esiphakeme, uLyn waba ngumvukelo waza waqalisa ukusela nokusebenzisa iziyobisi. Emva kokugqiba, waphuma ekhaya waza wangena kunye nabantu abahlukeneyo. Uyise wakhe wamisa indlela yakhe yokuphila kwaye wagxininisa ukuba abuyele ekhaya.
Wabuyela waya e-El Camino Junior College.
I-Fromme idibana noCharlie Manson
Emva kwengxabano enobuhlungu kunye noyise phezu kwencazelo yegama, uLyn wafaka iingxowa zakhe kwaye washiya ikhaya ixesha lokugqibela.
Wagqiba eVenice Beach apho wadibana noCharlie Manson . Aba babini bathetha ixesha elide kwaye uLyn ufumene uCharlie ethandeka njengoko wayethetha ngeenkolelo zakhe neemvakalelo zakhe ngobomi.
Uxhumo lwengqondo phakathi kwezi zibini lwomelele kwaye xa uManson amema uLyn ukuba ajoyine yena noMary Brunner ukuba bahambe ilizwe, uLyn wavuma ngokukhawuleza.
Fromme noGeorge Spahn
Njengoko umndeni wakwaManson ukhula, uLyn ubonakala ephethe indawo ephakamileyo kuMlawuli weManson.
Xa intsapho yafudukela kwisihlwama se-Spahn, uCharlie wamnika uLyn umsebenzi wokunyamekela uneminyaka engama-80 ubudala, uGeorge Spahn owayeyimfama kunye nomgcini wepropati. Igama likaLyn ekugqibeleni litshintshile ukuba "li-Squeaky" ngenxa yesandi asenzayo xa uGeorge Spahn egijima iminwe yakhe imilenze yakhe.
Kwakukhoxwa ukuba i-Squeaky inakekele zonke izidingo zikaShahnhn kubandakanywa nezo zesini.
I-Squeaky iyaba yiNtloko yoNtsapho
Ngo-Oktobha 1969, umndeni kaManson wabanjwa ngenxa yokuba i-auto kunye ne-Squeaky yayingqamene nalo lonke iqela. Ngalesi sikhathi, amanye amalungu eqela aye athatha inxaxheba ekubulaleni kakubi emzini we-actress uSharon Tate kunye nokubulawa kwabantu abakwaLaBianca . I-Squeaky yayingekho inxaxheba ngokuthe ngqo ekubulaweni kwaye yakhululwa entolongweni.
NgoManson ejele, uSqueaky waba yinhloko yentsapho. Wahlala ezinikezele kuManson, ebhenca ibunzi lakhe nge "X".
I-Squeaky ibanjwa ngamaxesha amaninzi
Amagunya awazange amthande i-Squeaky okanye nayiphi na intsapho yaseManson ngale nto.
I-Squeaky kunye nabanye abaye bayayibeka babanjwa phantsi kwamaxesha amaninzi, ngenxa yezenzo zabo ngexesha leTate-LaBianca.
I-Fromme ibanjwe ngamatyala kuquka ukudelelwa kwenkundla, ukugqithisa, ukukhwabanisa, ukuzama ukubulala, nokukhwela i-hamburger enikwe ilungu losapho uBarbara Hoyt ene-overdose ye-LSD.
Ixesha elize lizinikele
Ngo-Matshi ka-1971, uManson kunye nabameli bakhe babethetha ngokubulawa, emva koko batshintshwa isigwebo sempilo.
I-Squeaky yathuthela eSan Francisco xa uManson edluliselwa eSan Quentin , kodwa amagosa asejele awazange amvumele ukuba amtyelele. Xa uManson washukunyiselwa ejele laseFolsom, uSqueaky walandela waza wahlala endlwini yaseStockton, CA kunye noNancy Pitman, ababeneminyaka emibili, kunye noJames noLauren Willett.
Umtshutshisi uBugliosi ukholelwa ukuba iWilletts yayinoxanduva lokufa kommeli wenkundla, uRonald Hughes.
INkundla yeZizwe zeZizwe eziPhindwayo
NgoNovemba ka-1972, uJames noLauren Willett bafunyanwe bafile kwaye abaSqueaky nabanye abane baboshwe ngenxa yokubulala. Emva kokuba ezine zivakaliswe kulwaphulo-mthetho, uSqueaky wakhululwa waza waya eSacramento.
Yena kunye nentsapho yelungu uSandra Good bahamba kunye baza baqalisa iNkundla yeZizwe zamazwe ngamazwe eReal Retribution, inhlangano yokukhohlisa eyayisetyenziselwa ukuthusa abaphathi beenkampani ukuba bakholelwe ukuba babesemibutho emikhulu yobutshayelwayo ngenxa yokungcolisa imeko.
UManson wabhalela amantombazana njengamantombazana enqulo lakhe elitsha elibizwa ngokuba yiNkundla yoMgcini. Njengamanxini, i-Squeaky ne-Good yayivunyelwe ukulala ngesondo, ubukele i-movie enobudlova, okanye umsi kwaye kufuneka ukuba ugqoke kwiingubo ezide. UManson ubizwa ngokuba nguSqueaky "Olubomvu" kwaye umsebenzi wakhe ukugcina i-Redwoods. Okulungileyo kwakubizwa ngokuthi "i-Blue" ngenxa yamehlo akhe aluhlaza.
"Olubomvu" wenzelwe ukwenza uManson uziqhenyce ngomsebenzi wakhe wendalo, kwaye xa efumanise ukuba uMongameli uGerald Ford wayeza edolophini, wazinamathela .45 U-Colt ngokuzenzekelayo wangena kwi-holster yomlenze waza waya ePort Park.
Njengoko iFord ifikelele kwisihlwele, uSqueaky "Olubomvu" uLynette Fromme wachaza umpu kwiFoewe waza wanyuswa ngokukhawuleza yiNkonzo yeNgcaciso. Wahlawuliswa ngokuzama ukumbulala uMongameli , nangona kamva wachazwa ukuba isibhamu esasithwele asizange sibe neebhola kwidilesi yokudubula.
Ugwetyelwe Ubomi Ejele
Njengoko kwakungumendo weManson, u-Fromme wamela ekulingweni kwakhe kodwa wenqaba ukunikela ubungqina obuchaphazelekayo kwimeko kwaye endaweni yoko wasebenzisa njengesikhulumi sokuthetha ngendalo.
UMgwebi uThomas McBride ekugqibeleni wamsusa enkundleni. Ekupheleni kwetyala, u-Fromme waphonsa i-apple kwi-Attorney yase-US Intloko ye-Dwayne Keyes kuba wayengakhange aphendule ubungqina bezinto ezingekho emthethweni. ULynette Fromme watholakala enetyala waza wagwetywa ejele entolongweni.
Umntu ongaphantsi koMzekelo entolongweni
Iintsuku zasejele zase-Tome azizange zibe negalelo. Kwintolongo yasePleasanton California, kwaxelwa ukuba yiletha intsimbi yomlenze phantsi kwentloko yaseYulienne Busic, waseCroatia owayenguNational Nationalist owayesejele ngenxa yokubandakanyeka kwakhe kwi-airline ye-1976.
NgoDisemba 1987, wasinda etilongweni ukuze abone uManson owayeva ukubulawa ngumhlaza. Wakhawuleza wabanjwa waza wabuyela entolongweni. Wayekhonza kwaze kwaba ngo-2009 xa wakhululwa nge-parole.
I-Florida Cop Killer Shot 68 Izihlandlo zikhokelela ekuThengiseni nokuThengiswa kweDrama
I-7 enkulu kakhulu yeTornado Safety Myths & Misconceptions
I-16 yeeLwimi eziLungileyo kunye neeNkqubo zoThuculo
Iingxelo ezi-10 zokuba i-Obamacare yi-Failure
Iimpawu zeeLandi zaseMexico zaseMexico
Iintsuku Zosuku lweValentine
I-Sacbe - Inkqubo Yendlela YaseMaya yakudala
Ingaba kunye neNtsholongwane yeeNgqungquthela zabaMzali-abaphumeleleyo
Bet Uyazi Okwenziwe yi-Byssal Thread
Funda indlela yokufikelela kwi-PGA Tour
I $ AP Rocky Biography
Cuzco, Peru: Inkolelo yenkolo kunye nezopolitiko ye-Inca Empire
Usizi lukaMarther osemncinci (1774) nguJohn Wolfgang von Goethe
Ukucima i-Back Kick Tutorial - Funda I-Spinning Back Kick In Steps Steps
I-Biography kunye neProfayili yeHoobastank
Ukunyuka kwamaMace: I-Classic Arizona Rock Climb